Gary Neville Oo Magacaabay Saddex Kooxood Oo U Tartami Doona Ku Guulaysiga Premier League Isaga Oo Badalay Saadaashiisii Hore. – Kooxda.com
HomePremier LeagueGary Neville Oo Magacaabay Saddex Kooxood Oo U Tartami Doona Ku Guulaysiga Premier League Isaga Oo Badalay Saadaashiisii Hore.
November 25, 2020 Abdiwali Adan Jamac Premier League, Wararka Maanta 0
Halyeeyga Kooxda Man United ee Gary Neville ayaa badalay saadaashiisii horyaalka premier League ee uu sameeyay bilowgii xilli ciyaareedkan kadib markii ay kooxaha waaweyn si xun ku bilowdeen xilli ciyaareedka.
Gary Neville ayaa saadaaliyay in ay Liverpool si raaxo leh ugu guulaysan doonto horyaalka premier League xilli ciyaareedkan isaga oo saadaaliyay in ay Man City kula tartami doonta horyaalka laakiin waxa ay ku jirtaa kaalinta 13-aad.
Man United oo ku dhamaystay kaalinta 3-aad xilli ciyaareedkii hore ayaa ku jirta kaalinta 10-aad halka ay Arsenal ku jirto kaalinta 12-aad.
Waxa horyaalka hogaaminaya kooxda Tottenham kuwaas oo ayna cidna saadaasha ku darin halka ay Chelsea sidoo kale ku jirto kaalinta 3-aad.
Kooxda Liverpool ayaa ku kala dhex jirta labada kooxood ee reer London kuwaas oo Axada ku kulmi doonaa kulan premier League ah.
Neville ayaana sheegay in ay kooxaha Tottenham iyo Chelsea horyaalka kula tartami doonaan kooxda Liverpool.
Isaga oo arintaas ka hadlaya ayaa yidhi” Aad ayaan u sugaynaa kulanka chelsea Vs Tottenham ee Axada”.
“Waa xilli ciyaareed xiiso leh, waxa aan u malaynaynay in ay chelsea noqon doonto koox fiican bilowgia xilli ciyaareedka sababta oo ah waxa ay suuqa galiyeen lacag badan waxana ay la soo saxiixdeen xiddigo da’yar ah”.
“Waxa uu noqon karaa xilli ciyaareed ay Chelsea iyo Tottenham ku tartami karaan horyaalka, laakiin marna kaynu fikirin arintaas”.
“Waxa aan wada filaynay in ay Liverpool iyo Man City ku tartami doonaan horyaalka premier League, markii aan daawaday Man City kulamadii ugu dambeeyay, waxa aan aaminsanaa in ay Liverpool kaligeed horyaalka meel cidlo ah la mari doonto, laakiin haatan ma jirto arintaas kadib dhaawacii Van Dijk”.
“Wali ma aaminsani in ay Tottenham ku guulaysan doonto horyaalka sababta oo ah ma aaminsani in ay u dhawyihiin Liverpool laakiin shaqsi ahaan waa xilli ciyaareed la yaab leh”.
“Liverpool waxa soo gaadhay dhaawacyo badan waxana ay lumin doontaa dhibco badan waxana ay tartan adag kala kulmi doonaan Chelsea iyo Tottenham”.
Arsenal Oo Go’aan Ka Gaadhay Mustaqbalka Nicolas Pepe Kadib Casaankii Leeds United
Arsenal Oo Isha Ku Haysa In Ay Ka Fogaato Rikoodh Xun Oo Ay 10 Sano Ka Hor Ka Dhigtay Premier League.
Hordhac: Arsenal Vs Newcastle: Gunners Oo Rikoodh Fiican Ku Leh Newcastle.